Kuqhamuka Uhlupho Lwabafundisi Asebedlwengula Abesifazana Lamantombazana
Oppah Muchinguri(Photo by Mavis Gama)
HARARE — Uhulumende uveza ukuba sekuloluhlu olutsha lwabadlwengula abesifazane abazinkokheli zamabandla okholo lwesiKristu inengi labo kungabamabandla asungulwa kulezi nsuku. Ngasikhathi sinye zibikwa zisedlula inkulungwane ezimbili indaba zokudlwengulwa ezisiwa kwabomthetho kodwa kazifiki ingxenye lazo ezanelisa ukuya emthethwandaba ngezizatho ezimbalwa okubalisa ukungaqhubi kuhle komsebenzi kwabasesipholiseni kanye lokungathembeki.
Yikucula kweqembu lebandla le Zimbabwe Christian Church ngesikhathi lilibazisa uzulu obuthene emkhosini owenzelwe e Harare Gardens lamuhla wamalunga enhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lozulu weHarare oqoqwe ngabenhlanganiso ye Musasa Project bemanyene leye The Women’s Trust lohulumende ephathisana labehofisi yommeli wakwele Britain kuleli.
Uzulu ufole esukela esilindweni samabhasi ese Market Square elubhekise eHarare Gardens okungenye yenhlelo eziqoqwe ukunanza uhlelo lwensuku ezilitshumi lasithupha lokulwisana lendaba zokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantombazana kanye lokudlwengulwa kwabo olwe 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.
Embikweni wakhe ngesikhathi efundisa uzulu phezu komumo wendaba zokudlwengulwa elizweni,okhokhela kundaba zokutshutshiswa kwamacala – u Seniour Public Prosecutor unkosikazi Sharon Fero uqale ngokupha ingcazelo yokudlwengulwa etshiwo ngumthetho.
Uthi uFero okunye osekusethusa kulezi nsuku kuyikuba sekuvele olunye uluhlu lwabadlwengulayo laba njalo bezinkokheli kwezokholo. Inkokheli zokholo ikakhulu olwesiKristu kumele kube yizo eziphathisa abadabukileyo kodwa akusenjalo ngoba seziyizo ezidlwengula abesifazane laba kanye lamantombazana zicatsha ngegama likaNkulunkulu kuveza u Fero.
Ngasikhathi sinye okhokhela inhlanganiso ye Musasa Project e Harare unkosikazi Netty Musanhu uthi sezizinengi indaba zokudlwengulwa kwabesifazane emabandleni okholo lwesiKristu ngakho kumele bachaywe egcekeni abaphatheka kulokhu kuganga becatsha ngoNkulunkulu njalo bajeziswe kabuhlungu.
Ukhuthaze njalo ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zitholiswe imali yokuqhuba imikhankaso yokuphathisa omama ngolwazi phezu kwamalungelo abo uzulu wonke aphatheke kulomkhankaso wokuqeda udubo lokudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantomabazane.
Abaphethe ezokutshutshiswa kwamacala bathi edlula inkulungwane-1 059, asethe athoniswa emadale bethi ngoba inengi lalamacala amangalwa emapholiseni ephetha engasafikanga emthethwandaba ngezizatho ezehlukeneyo.
Lezi zibalisa ukungathembeki, ukusilela kobufakazi loba ukususwa kwalezindaba ngemva kokuba zimangaliwe emapholiseni ngoba umamangala eseguqule inqondo yakhe.
Umkhosi walamuhla ungenwe zinkokheli zokholo, inhlanganiso ezilwela ilulengelo labesifazane lamantombazana, inkokheli zikahulumende,abehofisi yommeli wakwele Britain kanye lozulu weHarare.
Wenziwe ngaphansi kwesihloko esinanzwa ngamazwe womhlaba esithi: From peace in the home to peace in the world, lets challenge militarism and end violence against women.